Monday May 18, 2020 - 18:29:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysteen deegaan katirsan Sh/Hoose.
sawir hore Kuunyo Barroow
Xalay maqribkii ayay diyaarado Drone ah waxay duqeeyeen guri dad shacab ah deganaayeen oo kuyaal deegaanka Kuunyo Barroow.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dhowr gantaal ay ku dhaceen guriga waxaana ku dhaawacmay Firirka gantaallada ay rideen diyaaradaha Mareykanka ayaa 6 qofood dhaawacay 2 dumar ah iyo 4 carruur ah, Hooyo iyo 3 carruur oo ay dhashay ayaa ku jira dadka dhaawaca ah, dadka dhaawacmay ayaa xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayaa isbitaalka deegaanka.
Taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee (AFRICOM) ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan isagoo dhibaatada uu ugeystay shacabka boor isku qaris uga dhigtay in ay dileen dagaalyahanno katirsan Al Shabaab, dadka deegaanka waxay sheegeen in duqeyntu aan lagu dilin xubno Al Shabaab katirsab balse shacab rayid ah lagu waxyeelleeyay.
Warbaahinta islaamiga oo booqatay guriga duqeyntu haleeshay ayaa soo qaadday sawirro muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay duqeynta, carruurta dhaawacantay waxaa jirkooda si xun udhaawacmay gantaallada ay tuurayeen diyaaradaha Mareykanka.
Burbur baaxad leh ayaa gaaray dhismayaal dhowr ah oo kuyaal deegaanka Kuunya Barroow waana fal dambiyeed kale oo uu Mareykanku ka geysanayo dalka Soomaaliya.
Duqeymo saf mareen ah oo sanadkaan gudihiisa ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen Soomaaliya ayay ku dileen tobaneeyo ruux shacab ah.